Daawo cusub oo qaaxada loo soo saaro tii ugu horreysey muddo 50 sano ah – Ayaa wax ka qabaneysa cudurka noocyadiisa u adkeysta daawooyinka - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Médecins Sans Frontières waxa ay ku baaqeysaa in degdeg looga diiwaangeliyo dalalka ay ka jirto qaaxada u adkeysata daawada
NEW YORK/GENEVA – Embargo TBC – Médecins Sans Frontières (MSF) ayaa soo dhoweysey oggolaanshaha Hay’adda Maamusha Cuntada iyo Daawada ee dalka Mareykanku ay oggolaatey daawada bedaquiline, oo ah daawo cusub oo ah tii ugu horreysey oo wax ka qabata qaaxada oo la diiwaangeliyo tan iyo sanadkii 1963dii.
“Daawadan cusub oo tii ugu horreysey oo lagu daaweeyo qaaxada oo la soo saaro muddo 50 sano ah waa guul ballaaran,” ayaa uu yiri Dr Manica Balasegaram, oo ah Agaasimaha Fulinta ee Ololaha MSF ee Helidda Daawada ee loo yaqaanno Access Campaign. “Xaqiiqada ah in daawadu ay wax ka qabaneyso noocyada cudurka ee u adkeysa daawada ayaa suuragelin karta in daawadan ay xaaladda gebi-ahaanba beddesho.”
Maanta daaweynta qaaxada u adkeysata dawooyinka badan waa mid soconeysa laba sano oo la qaadanayo ilaa 20 kiniini oo kala duwan maalintii iyo ilaa siddeed bilood oo maalin kasta qofka irbado qaadanayo. Bukaannada ayaa soo wajaha dhibaatooyin ka dhasha daawooyinka, oo u dhexeeya dhego-beel abid ah iyo laqanyo joogto ah ilaa buufis/qulub (psychosis). Caalami ahaan, keliya 48% dadka loo bilaabo daawada Qaaxada u adkeysata Daawooyinka ayaa caafimaada. Barnaamijyada MSF, nisbada dadka caafimaada xoogaa waa ay ka roon tahay sidaas – waana 53% – taasna weli waa mid aad u hooseysa oo aan la aqbali karin.
“Wasaaradaha caafimaadka iyo kuwa maamula dawooyinka waa in ay wada-shaqeeyaan si ay u hubiyaan in dadka qaba qaaxada u adkeysata dawooyinka badan ay sida ugu horreysa ee suuragalka ah uga faa’iideystaan horumarkan muhiimka ah ee laga gaarey dhinaca caafimaadka. Waa mas’uuliyad dhammaanteen ina wada saaran in aan adeegsanno daawada bedaquiline si aan u dejinno qiyaaso daaweyn cusub oo muddadeedu gaaban tahay, ay bukaannadu u adkeysan karaan, oo waxtarkeeduna ka badan tan hadda oo loogu talogaley qaaxada u adkeysata daawada,” ayaa uu yiri Dr. Balasegaram. “Maaddaama ay daawo wanaagsan ay waddada ku soo jirto, waa in aan ku dhiirranaa in aan maanta kor u qaadno dadaalladeena ku aaddan daaweynta qaaxada u adkeysata dawooyinka badan.”
Baahsanaanta qaaxada u adkeysata daawada waa mid aad u weyn, iyada oo 310,000 bukaanno cusub ah la soo sheegey sanadkii 2011. Laakiin caalami ahaan, keliya 19% dadka loo maleynayo in ay qabaan cudurka ayaa daawo hela.
“Kor u qaadista daaweynta qaaxada u adkeysata daawada ee dunida ayaa aad u hooseysa, taas oo badiba sababteedu tahay qiyaasta daawada hadda la isticmaalo oo ah mid aad u adag oo aadna ugu kharash badan barnaamijyada caafimaadka oo kuna adag bukaannada in ay u adkeystaan,” ayaa uu yiri Dr Francis Varaine, oo ah hoggaamiyaha Koox-halweedda MSF ee wax ka qabashada Qaaxada. “Marka la helo qiyaas daaweyn ka fudud, ka muddo gaaban oo ka waxtar badan tan hadda jirta, waxaan awoodi doonnaa in aan kor u qaadno daaweynta oo aan dad ka badan kuwa hadda aan ka daaweyno qaaxada u adkeysata daawada.”
Marka laga soo tago daawada bedaquiline, oo ay sameysey Janssen, daawo labaad oo wax ka tarta qaaxada u adkeysata dawooyinka badan oo lagu magacaabo delamanid, oo ay sameysey Otsuka, ayaa hadda laga diiwaangelinayaa Hay’adda Daawooyinka ee Reer Yurub waxaana la filayaa in isticmaalkeeda la oggolaado sanadka 2013ka. Wadajir ahaan, labada daawo waxaa ay ka dhigan yihiin fursad aan horey dad u soo marin oo lagu wanaajin karo daaweynta qaaxada u adkeysata dawooyinka badan, waxaana degdeg loogu baahan yahay in dawooyinka la isku dheeho oo loo soo saaro habka ugu waxtarka badan.
Laakiin helidda daawooyinka cusub waxaa ay inta badan ku xirnaan doontaa hadba kuwa farsameeya. MSF waxaa ay kuwa daawooyinka farsameeya ugu baaqeysaa in daawooyinka ay ka dhigaan kuwo la heli karo si cilmi-baaris loogu sameeyo si loo sameeyo qiyaas daawo oo ka muddo gaaban kana waxtar badan kuwa hadda jira, in ay sida ugu dhaqso badan uga diiwaangeliyaan dalalka cudurku uu faraha ba’an ku hayo marka ugu horreysa ee la oggolaadaba, iyo in ay hubiyaan in ay dawooyinku noqdaan kuwo qiimo la goyn karo lagu iibiyo dalalka loogu baahi badan yahay.
MSF waxaa ay 26,600 bukaannada qaaxada ah ku dabiibtey 36 dal sanadkii 2011kii – 1,300 ka mid ah bukaannadan waxaa ay qabeen noocyada cudurka ee daawooyinka u adkeysta.
Tags: MSF, Somalia, TB, world TB day